ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ထာဝစဉ်ဝေးနေမှာလား (Tu Maung Nyo) | MoeMaKa Burmese News & Media
တူမောင်ညို - ၇ လုံး တပြည် (NCA) စာချုပ်ကြီး
ဇာနီကြီး - ဘတ်စကားခကလွဲပြီး အားလုံးဈေးကြီးရခြင်း အကြောင်း (မြန်မာပြည် ၂၀၁၅)
တူမောင်ညို ၊ သြဂုတ် ၁၄၊ ၂၀၁၂
(ကျနော်မိတ်ဆွေနဲ့ကျနော် “ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး”ကိစ္စ အမြင်ဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ် ၊ မိတ်ဆွေများလည်း စိတ်ပါဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဖြင့် ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ဝေငှလိုက်ပါတယ်)
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ (၁/၂၀၁၂) အစည်းအဝေးမှာ ပြောတဲ့ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း ရဲ့ အမှာစကားကို ခင်ဗျားဖတ်ပြီးရောပေါ့။
ဟုတ်ကဲ့၊ ပြောပါဦးဗျ ခင်ဗျားသဘောထားအမြင်၊ ကြားပါရစေ။
သမ္မတတွေရွေးကတည်းက သမ္မတတွေထဲမှာ တိုင်းရင်းသားထဲက သမ္မတ (၁) ဦးတော့ပါသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အသံထွက် ပေါ်ခဲ့တယ်။ ခင်ဗျားမှတ်မိမှာပါ။ လက်တွေ့ရွေးချယ်လိုက်တော့လည်း ဒုတိယသမ္မတအဖြစ် ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း အရွေးချယ်ခံခဲ့ ရတယ်လေ။ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း က ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ( USDP) ကပဲဗျ။
ဟုတ်တယ်လေ။ တိုင်းရင်းသားထဲက ဒုတိယသမ္မတ ဖြစ်လာတာတာနဲ့ဘာထူးနိုင်မှာလို့လဲဗျ။ သူ့ပါတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ညွန်ကြားတဲ့ အတိုင်းလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရမယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈) နဲ့ အခြားသော တည်ဆဲဥပဒေဘောင်ထဲကနေ လုပ်ဆောင်ရမှာပဲ မဟုတ်လား။ သမ္မတနဲ့ဒုတိယသမ္မတ (၂) ဦး ဟာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ကပဲဖြစ်ပါတယ်။
မှန်တာပေါ့ဗျာ။ ကျနော်ပြောချင်တာအဲဒီအချက်ပါပဲ။ တိုင်းရင်းသားထဲက ဒုတိယသမ္မတဖြစ်လာရုံနဲ့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ မျှော်လင့် ချက်တွေ၊ ဆန္ဒတွေဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာပါ။ အခုပဲကြည့်လေ။ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ ဟာ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော် ဆောင်ရေးဗဟိုကော်မတီထံအချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ တင်ပြအစီရင်ခံရမယ်။ အဆုံးအဖြတ် အားလုံးကို ဗဟိုကော်မတီကပေးမှာဗျ။ အဲဒီ ဗဟိုကော်မတီဆိုတာ တကယ်တော့ “အမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့ ကာကွယ်ကောင်စီ” (ကာလုံ) ပါပဲဗျာ။
“ပင်လုံကဲ့သို့ညီလာခံကြီး”ဆိုတဲ့ စကားလုံး ထည့်မပြောတော့ဘူးဗျ။ သူတို့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့် (၃) ဆင့်ဆိုတာက လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈)လက်ခံ၊ လက်နက်စွန့်၊ နိုင်ငံရေးပါတီထောင် ကြဖို့ပဲပေါ့ဗျာ။ ဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းက ဒီအချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောထားတယ်ဗျ။
ဟုတ်တယ်။ “ပင်လုံ” ဆိုတာကို တိုင်းရင်းသားတွေ သည်းခြေကြိုက်စကားမို့ သူတို့တမင်ထည့်ပြောတာပါ။ “ပင်လုံ” နဲ့ခွဲမရပဲ တတွဲထဲပြောရမယ့် “ဖက်ဒရယ်” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သူတို့မဟဝံ့ပါဘူး။ သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့(ကျိုက္ကဆံ/ညောင်နှစ်ပင်)ညီလာခံဆိုတာတွေဟာ ဘယ်လို ညီလာခံအမျိုးအစားတွေ လည်းဆိုတာ ခင်ဗျားသိပြီးသားပဲလေ။
အခရာကျတဲ့အဆင့်က ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ “ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဆွေးနွေးခြင်း” ဆိုတာပဲဗျ။ ဒီအဆင့်မှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈)လက်ခံ၊ လက်နက်စွန့်ပြီး၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် မှာ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ကြဖို့ပဲဗျ။
တတိယအဆင့်ဆိုတဲ့ “ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အဆင့်ဆွေးနွေးခြင်း” ဆိုတာကတော့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ နိုင်ငံရေး ပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီး၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရွေးချယ်ခံရပါမှ လွှတ်တော်တက်ခွင့်ရမှာလေ။ ဒီတော့ဗျာ အကြမ်းဖျင်း ပြောရရင် ၂၀၁၅ နောက်ပိုင်းမှ ဖြစ်မှာနိုင်ပေါ့ဗျာ။ ၂၀၁၅ ဆိုတာက နောက်ထပ်အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရမယ့် အချိန်ကာလ မဟုတ်လား။
ဒုတိယအဆင့်ကို လွယ်လွယ်ကူကူကျော်ဖြတ်နိုင်ပါ့မလားဗျ။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေက ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ဆွဲခေါ်နေတဲ့ လမ်းအတိုင်းပါသွားနိုင်သလားဗျ။
ပါမသွားနိုင်ဘူးလို့လည်း ဘယ်သူမှ ယတိပြတ် မပြောနိုင်ဘူးဗျ။ သူတို့လည်း ခင်ဗျားတို့ကျနော်တို့မြင်သလို မြင်နေတာပဲလေ။ သူတို့လည်း ပါးပါး နပ်နပ် လည်လည် ဝယ်ဝယ်ရှိသူတွေပါဗျာ။ သူတို့အတွက် စိတ်မပူပါနဲ့။ သူတို့မှာက ကိုယ်ပိုင်တပ်၊ ကိုယ်ပိုင် လှုပ်ရှား နယ်မြေရှိတယ်ဗျ။ ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ရှားနယ်မြေမရှိတဲ့သူတွေအတွက်သာ စိတ်ပူရမှာပါဗျာ။
ဒီလိုပါဗျ။ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ထဲက တချို့ပြောတာက အခုဆွေးနွေးရတာနဲ့ ယခင် (နဝတ-နအဖ) စစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးရတာ မတူဘူးလို့ပြောနေလို့ပါဗျာ။ “ပုံသဏ္ဍာန်ခြင်းလည်း မတူဘူး၊ အခြေခံခြင်းလည်း မတူဘူး။ ဒီ အစိုးရသစ်နဲ့အလုပ် လုပ်ရတာ အရင် အစိုးရတွေတုန်းကဆိုရင် စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲလို့ပြောပေမယ့် သတ်မှတ်ချက်တွေချထားတယ်။ ဟိုလိုဖြစ်ရမယ်၊ ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတာတွေကို သတ်မှတ်ထားတယ်။ အဲဒီဘောင်ထဲကိုဝင်ရင်ဝင်/မဝင်ရင်ပြောစရာစကားမရှိဘူး။ အခု အစိုးရသစ် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ထွက်လာတဲ့ အစိုးရ သစ်လက်ထက်မှာ စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အခါကြတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းပြောဆိုတာတွေ၊ ပြောဆိုခွင့်တွေပိုပြီးရှိလာတယ်”တဲ့ဗျ။ သူပြောတော့လည်း ဟုတ်နေတာပဲ။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့ ထိတွေ့ဆွေးနွေးနေတာက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈)နဲ့အညီ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဘောင်ထဲမဝင်/ဝင်အောင် ဆွဲသွင်းနေတာပဲမဟုတ်လားလို့ တွေးမိတယ်ဗျာ။
သူတို့ သိပါတယ်ဗျာ။ သိပ်ပြောမနေပါနဲ့။ “ပကတိအခြေအနေအရ နိုင်ငံတော်၏ ကံကြမ္မာသည် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိမှု၊ မရရှိမှု အပေါ်တွင် လုံးဝမူတည်နေသော သဘောပါရှိနေသည့်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးကို မည်သို့ပင်ဖြစ်စေရအောင်ယူမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ငြိမ်း ချမ်းရေးမှလွဲပြီး အခြားရွေးစရာလမ်းမရှိဖြစ်နေပါကြောင်း” ဆိုပြီး ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းက ပြောထားတယ်ဗျ။ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် ငွေကုန်လူပန်းဖြစ်ခဲ့ပြီး တိုင်းပြည်လည်း LDC ဖြစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့။ တိုင်းပြည် LDC ဖြစ်ခဲ့ရပေမယ့် အုပ်စိုးသူအဆက်ဆက်ကတော့ ထား စရာမရှိအောင် ချမ်းသာကြွယ်ဝခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ထည့်မပြောဘူးဗျာ။ ဒါ့အပြင် “မိဘလို အစ်ကို အစ်မလိုဖြစ်နေတဲ့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ” အနေနဲ့ စိတ် ရှည်သည်းခံပြီး သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်လုပ်ရမယ်လို့လည်းဆိုသဗျ။
ငြိမ်းချမ်းရေးယူမှ ဖြစ်မယ်လို့ ပိုင်းဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင် ဘယ်လိုနည်းလမ်းမျိုးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်ယူမလဲ ဆိုတဲ့အချက် အခရာ ပဲဗျ။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ မိဘ၊ အစ်ကို၊ အစ်မ ဆိုတာကတော့ အပေါ်စီးယူတဲ့သဘောပဲဗျ။ တန်းတူရည်တူသဘောမထားတာပဲ။
ပြည်တွင်းစစ်ပြဿနာ အခုလိုရှည်ကြာခဲ့ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းဟာ နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ တန်းတူရည်တူ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့လို့ပဲဗျ။
အရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေမယ့်ငြိမ်းချမ်းရေးကို လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ တကယ်တမ်းရရှိလိုတယ် ဆိုရင်တော့ ပထမအချက်က သဘောထားမှန်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒုတိယချက်က နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဆွေးနွေးဖြေရှင်းဖို့ပါပဲဗျာ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈) နဲ့ အကြပ်ကိုင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ဆိုတာ ထာဝစဉ်ဝေးနေမှာအသေအချာပါပဲဗျာ။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:တူမောင်ညို, သတင်းဆောင်းပါး
4 Responses to ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ထာဝစဉ်ဝေးနေမှာလား (Tu Maung Nyo)
Mgwaimin on August 14, 2012 at 9:12 pm
တူမောင်ညိုရဲ့ စာတွေဖတ်ရတာ အဆိပ်သီးတွေ စားရသလုိုပါဘဲဗျာ။ အစုိုးရကုို အကောင်းမြင်လုို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ အစွန်းရောက်ရင် ဘာမှမကောင်းပါဘူး။ ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲဆုိုသလုို။ တူမောင်ညုို ပညာရှိပီ သတိဖြစ်ခဲဖြစ်နေပီထင်တယ်။ အဆိပ်ပေးသော စာများကုို မတင်တာကောင်းပါတယ် မုိုးမခ၊ ခင်များတုို့ ပြည်သူ့အသံကုို နားထောင်လောက်ပါတယ်နော်
ကိုဖြူ on August 15, 2012 at 4:35 am
မိဘလို၊ အကို အမလို …. တဲ့လား? ရီရတယ်နော်?
ko lay on August 15, 2012 at 10:19 am
Tu Mg Nyo’s writings are Poisons.
မမ on August 16, 2012 at 2:19 pm
သောသူများအားလုံးကိုမကြိုက်ပါ။ ရှုံ့ချပါသည်။အဆင့်အတန်းတွေသိပ်ခွဲနေတာကိုမခံစားနိုင်ရင်တော့လည်းမရှိ ရှိတာနဲ့